မြန်မာ့တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး အေအေအဖွဲ့နဲ့ တိုက်ပွဲအတွင် ကျဆုံး - Razzwire
Home / News / မြန်မာ့တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး အေအေအဖွဲ့နဲ့ တိုက်ပွဲအတွင် ကျဆုံး
မြန်မာ့တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး အေအေအဖွဲ့နဲ့ တိုက်ပွဲအတွင် ကျဆုံး
ချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝမြို့ အနောက်ဖက်မှာ သောကြာနေ့က ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော်ဘက်က ဗိုလ်ကြီးတယောက်နဲ့ အခြားအဆင့်တချို့ကျဆုံးသလို၊ AA ဘက်ကလဲအကျအဆုံးရှိတယ်လို့ မြန်မာ့တပ်မတော်က ပြောပါတယ်။ RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုနေရိန်ကျော် တင်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ AA ရခိုင့်တပ်မတော်တို့ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့သောကြာနေ့က ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်က တိုက်ပွဲမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ခြေမြန်တပ်ရင်း ၂၁၂ က ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ အရာရှိတယောက် ကျဆုံးပြီး၊ အခြားအဆင့်စစ်သားတချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့ AA အဖွဲ့ဘက်ကပြောပါတယ်။
အဲဒီနေ့က ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အေအေ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ခိုင်သုခက …..
“ ၁၇ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ပလက်ဝမြို့ရဲ့အနောက်ဖက် ၅ ဒသမ ၂ ကီလိုမီတာအကွာ ခဝဲကားလမ်းပေါ်မှာ ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ တပ်မ ၁၁ လောက်ခံ ခလရ ၂၁၂ စစ်ကြောင်းကို ရခိုင့်တပ်မတော် ကွန်မန်ဒိုတွေကဝင်တိုက်တာရှိတယ်၊
အဲဒီမှာ တစ်နာရီခွဲနီးပါးလောက်ကြာတဲ့ တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ဗမာစစ်တပ်ဘက်က ဗိုလ်ကြီးအောင်မျိုးမြင့်၊ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် ကြည်း (၅၉၈၉၅) နောက်ပြီးတပ်ကြပ်ကြီး နှစ်ယောက်ရယ်၊ အားလုံးဆိုရင် ၁ဝ ဦး ကျဆုံးတာပေါ့”
ကျဆုံးတဲ့အရာရှိဟာ ဗိုလ်ကြီးအောင်မျိုးမြင့်ဆိုသူဖြစ်ပြီး၊ မကြာသေးခင်ကမှ ရှမ်းပြည်နယ်ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို တာဝန်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့သူလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ မြန်မာ့တပ်မတော် ရဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတချို့လည်း သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ အေအေ အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာ့တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFA က ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ ….
“ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ပလက်ဝမြို့အနောက်ဖက်မှာတော့ တိုက်ပွဲဖြစ်တာရှိတယ်။ ပလက်ဝရဲ့အနောက်ဖက် ၃ မိုင်အကွာလောက်မှာ ဖြစ်တာ၊ ကျနော်တို့ဘက်က အရာရှိတယောက် ကျဆုံးတာရှိတယ်။ ဒဏ်ရာရတာ အနည်းငယ်ရှိတယ်။ ရန်သူ့ဘက်က အလောင်း သုံးလောင်း ရလိုက်တာရှိတယ်”
အဲဒီလို AA အဖွဲ့က အလောင်းသုံးလောင်းရလိုက်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ခိုင်သုခက ငြင်းဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၈ ဒီဇင်ဘာလကစလို့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ AA ရခိုင့်တပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲပေါင်း အနည်းဆုံး ၁၇ဝ ကျော်နေပြီလို့ သိရသလို နှစ်ဖက်အကျအဆုံးတွေရှိပါတယ်။
ဒီ ခြောက်လအတွင်း စုစုပေါင်း ဘယ်လောက်ကျဆုံးလဲဆိုတာတော့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက သူ့အနေနဲ့ စာရင်းပေါင်းချုပ် မသိရသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ AA ဘက်ကလဲ အကျအဆုံးတွေရှိပေမယ့် စုစုပေါင်းစာရင်း မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
ခငျြးပွညျနယျပလကျဝမွို့ အနောကျဖကျမှာ သောကွာနကေ့ ဖွဈတဲ့တိုကျပှဲအတှငျး မွနျမာ့တပျမတျောဘကျက ဗိုလျကွီးတယောကျနဲ့ အခွားအဆငျ့တခြို့ကဆြုံးသလို၊ AA ဘကျကလဲအကအြဆုံးရှိတယျလို့ မွနျမာ့တပျမတျောက ပွောပါတယျ။ RFA ဝိုငျးတျောသား ကိုနရေိနျကြျော တငျပွထားပါတယျ။
မွနျမာ့တပျမတျောနဲ့ AA ရခိုငျ့တပျမတျောတို့ရဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့သောကွာနကေ့ ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျက တိုကျပှဲမှာ မွနျမာ့တပျမတျောခွမွေနျတပျရငျး ၂၁၂ က ဗိုလျကွီးအဆငျ့ရှိတဲ့ အရာရှိတယောကျ ကဆြုံးပွီး၊ အခွားအဆငျ့စဈသားတခြို့ ထိခိုကျဒဏျရာရတယျလို့ AA အဖှဲ့ဘကျကပွောပါတယျ။
အဲဒီနကေ့ ဖွဈရပျနဲ့ပတျသကျလို့ အအေေ ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ခိုငျသုခက …..
“ ၁၇ ရကျနေ့ မနကျ ၉ နာရီ ၄၅ မိနဈမှာ ပလကျဝမွို့ရဲ့အနောကျဖကျ ၅ ဒသမ ၂ ကီလိုမီတာအကှာ ခဝဲကားလမျးပျေါမှာ ဗမာစဈတပျရဲ့ တပျမ ၁၁ လောကျခံ ခလရ ၂၁၂ စဈကွောငျးကို ရခိုငျ့တပျမတျော ကှနျမနျဒိုတှကေဝငျတိုကျတာရှိတယျ၊
အဲဒီမှာ တဈနာရီခှဲနီးပါးလောကျကွာတဲ့ တိုကျပှဲအတှငျးမှာ ဗမာစဈတပျဘကျက ဗိုလျကွီးအောငျမြိုးမွငျ့၊ ကိုယျပိုငျနံပါတျ ကွညျး (၅၉၈၉၅) နောကျပွီးတပျကွပျကွီး နှဈယောကျရယျ၊ အားလုံးဆိုရငျ ၁ဝ ဦး ကဆြုံးတာပေါ့”
ကဆြုံးတဲ့အရာရှိဟာ ဗိုလျကွီးအောငျမြိုးမွငျ့ဆိုသူဖွဈပွီး၊ မကွာသေးခငျကမှ ရှမျးပွညျနယျကနေ ရခိုငျပွညျနယျကို တာဝနျနဲ့ ပွောငျးရှသှေ့ားတဲ့သူလို့ သိရပါတယျ။ အဲဒီတိုကျပှဲမှာ မွနျမာ့တပျမတျော ရဲ့စဈလကျနကျပစ်စညျးတခြို့လညျး သိမျးဆညျးရမိတယျလို့ အအေေ အဖှဲ့က ပွောပါတယျ။
ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျလို့ မွနျမာ့တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့က ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးကို RFA က ဆကျသှယျမေးမွနျးတဲ့အခါ ….
“ ၁၇ ရကျနမှေ့ာ ပလကျဝမွို့အနောကျဖကျမှာတော့ တိုကျပှဲဖွဈတာရှိတယျ။ ပလကျဝရဲ့အနောကျဖကျ ၃ မိုငျအကှာလောကျမှာ ဖွဈတာ၊ ကနြျောတို့ဘကျက အရာရှိတယောကျ ကဆြုံးတာရှိတယျ။ ဒဏျရာရတာ အနညျးငယျရှိတယျ။ ရနျသူ့ဘကျက အလောငျး သုံးလောငျး ရလိုကျတာရှိတယျ”
အဲဒီလို AA အဖှဲ့က အလောငျးသုံးလောငျးရလိုကျတယျ ဆိုတာကိုတော့ အဖှဲ့ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ခိုငျသုခက ငွငျးဆိုပါတယျ။အခုဆိုရငျ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၈ ဒီဇငျဘာလကစလို့ မွနျမာ့တပျမတျောနဲ့ AA ရခိုငျ့တပျမတျောတို့ တိုကျပှဲပေါငျး အနညျးဆုံး ၁ရဝ ကြျောနပွေီလို့ သိရသလို နှဈဖကျအကအြဆုံးတှရှေိပါတယျ။
ဒီ ခွောကျလအတှငျး စုစုပေါငျး ဘယျလောကျကဆြုံးလဲဆိုတာတော့ ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက သူ့အနနေဲ့ စာရငျးပေါငျးခြုပျ မသိရသေးဘူးလို့ ပွောပါတယျ။ AA ဘကျကလဲ အကအြဆုံးတှရှေိပမေယျ့ စုစုပေါငျးစာရငျး မပွောနိုငျသေးပါဘူး။
မြန်မာ့တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး အေအေအဖွဲ့နဲ့ တိုက်ပွဲအတွင် ကျဆုံး Reviewed by zawzyne on May 23, 2019 Rating: 5